Ihe atụ nke akwụkwọ akụkọ na otu esi emepụta ihe dị irè maka ụlọ ọrụ gị | ECommerce ozi ọma
Ozugbo onye nnata ahụ kpebiri imepe email dabere na nkwa dị na isiokwu ahụ, ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ email gị ga-ekweta na nkwa ahụ.
Ọ bụrụ na mkpọsa gị agaghị emezu nkwa ahụ nke mere ka onye na-agụ ya pịa na mbụ, ha ga-enwe ezigbo ihe mere ị ga-eji leghara ọ bụghị naanị ozi email ahụ, kamakwa akara gị. Enwere ike itinye uche ha na ihe ọzọ na igbe mbata gị, na-anapụ gị ohere ịduzi ha ọzọ na njem ịzụ ahịa ha.
E meela anyị niile ọtụtụ ihe atụ nke akwụkwọ akụkọ email na-abaghị uru, nke pụtara na onye ọ bụla kwesịrị ịnwe ezigbo echiche nke ihe ọjọọ dị ka ya. Akwụkwọ ozi email dịkarịsịrị, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmaahịa ọ bụla na-eji ha eme ihe ọ bụla ... yabụ gịnị kpatara na ọtụtụ n'ime ha enweghị ezigbo mma?
1 Okike nke akwukwo ozi e-commerce
2 Gịnị bụ ihe nzuzo? Nye uru
3 Akwụkwọ ozi email gị ga-enwe nzube
4 Setịpụ ihe kacha mkpa
5 Kee ihe ndi kwesiri
6 Kedu vidiyo ndị m kwesịrị ịkekọrịta?
Okike nke akwukwo ozi e-commerce
O yiri ka ọbụna ndị na-ere ahịa na-ewu mkpọsa ndị a na-enweghị nsogbu na-ekpughere ihe atụ ndị na-adịghị mma, mana ọtụtụ n'ime ha enweghị ike ịmepụta atụmatụ siri ike iji nyefee ọdịnaya na-adọrọ adọrọ nke ga-eme ka ndị na-ege ha ntị nwee mmasị.
Yabụ ka anyị mikpuo n'ime akwụkwọ ecommerce na-aga nke ọma nke ga-eme ka ndị nnata gị nwee obi ụtọ na ha kpebiri iji akara gị ga-aga njem ha.
Mesie ihe na uru bara na mbupu ọ bụla ike.
Ọ bụghị ụdị ozi ahịa niile ka emepụtara. Mana echiche zuru oke n'azụ nkwukọrịta ahịa dị irè bụ otu ihe n'ofe nyiwe niile: nyefee ihe na uru.
Enwere ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ na-abanye n'ịmepụta ọdịnaya email dị elu, dị ka imewe, ịhazi onwe ya, na nkewa ndị ahịa, mana ọ bụrụ na ịnweghị uru na uru dị n'obi ozi gị, ị ga-ada na ya agaghị ejikọ ndị na-ege ntị.
N'agbanyeghị ọtụtụ akwụkwọ akụkọ eCommerce, ọ bụghị naanị na e nwere ụdị ndị na-eme ya nke ọma, mana enwekwara azịza ndị ahịa na-akwụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma ụgwọ. Anyị achọpụtala na n'agbanyeghị ịnweta nzacha 8-nke abụọ na enweghị mmasị na ahịa email, Gen Z na puku afọ iri na-ahọrọ ịnọrọ na akara site na email.
Gịnị bụ ihe nzuzo? Nye uru
Mgbe a bịara n’iziga ozi-e nke ndị ọgbọ ọ bụla nwere ike iso na ya, ọ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla ịkwalite maka nyiwe mkpanaka, ebe ihe karịrị 50% nke mkpọsa mepere na ekwentị. Uru bara uru, yabụ mgbanwe igbe mbata dị ka taabụ nkwalite Gmail nwere ike ịdị ezigbo mma, ebe ndị debanyere aha ga-ahụ taabụ ahụ kpọmkwem mgbe ha chọrọ ịchọ azụmaahịa.
Ihe a niile na-ezo aka na ndị na-ege ntị karị, n'ihi na ụdị agaghịzi asọmpi na ọdịnaya ndị ọzọ, dị ka akwụkwọ ozi onwe onye, ​​na igbe ozi ndị nnata.
Isi okwu bụ na akwụkwọ akụkọ email na-agbakọ ọnụ naanị n'ihi na ndị ahịa na-eche na ọ dị mkpa ịrụ ọrụ iji nwee otu.
Kwesịrị ịkọwapụta atụmatụ gị nke ọma iji kọọ akụkọ na-emekọ ihe ọnụ na-agbakwunye ndị na-ege ntị uru ma na-eduzi ha site na ọkwa dị iche iche nke usoro ịzụta. Ọ ga-agbakwunye ma jikọta ya na usoro sara mbara nke ịzụ ahịa na azụmaahịa gị.
Mgbe emere ya n'ụzọ ziri ezi, ịre ahịa email maka ụdị e-commerce nwere ike mepụta njikọ dị oke mkpa ma na-adịgide adịgide n'etiti ndị ahịa na akara ahụ, na-ewetara ndị abụọ ahụ uru ga-adịgide adịgide. Lelee ihe atụ a site na ụlọ ọrụ na-eme njem n'ịntanetị Booking.com, nke na-enye ndị nduzi obodo n'akụkụ CTA maka ebe obibi.
Akwụkwọ ozi email gị ga-enwe nzube
Mgbe ha kachasị mma, akwụkwọ akụkọ email na-akọrọ onye na-agụ akụkọ na-akpali akpali. Ha na-enye ihe ọmụma, na-akụzi ihe, ma na-enye ntụziaka doro anya banyere otu onye na-agụ ya ga-esi gaa ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịba uru maka ndụ ya ma ọ bụ ebumnuche ya.
Akwụkwọ akụkọ E-azụmahịa jikọtara ya na ndị ahịa.
Nke mbu, akwukwo ozi email nwere ike ibunye otutu ozi ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na tweets n'ozuzu ha kwesịrị ịkọwa njikọ njikọta na ihe dị mkpa karị, ma ọ bụ bọọdụ mkpọ iji jide ozi ndị a ma ama na ozi ndị ama ama, akwụkwọ ozi email nwere ike ibugharị onye na-agụ ya ihe ọmụma dị ịtụnanya n'ụdị nke ha.
Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ ecommerce na-enwekarị njikọ (ọ na-abụkarị n'ụdị CTA), ha nwekwara ike ịbụ ihe ọmụma na-enweghị atụ.
Akwukwo ozi gi aghagh ibu nke aka gi.
Ozi ịntanetị dị oke egwu ma nyefee onye na-agụ ya. Mgbe ị mepụtara telivishọn ma ọ bụ mgbasa ozi redio, ma ọ bụ mgbasa ozi maka weebụsaịtị ma ọ bụ ọwa mgbasa ozi mmekọrịta, ị nweghị ikike dị ukwuu karịa onye na-ahụ ya karịa ịtụle data igwe mmadụ.
Mgbe ị na-ezipụ akwụkwọ ozi email, ị na-ebufe ọdịnaya ahụ na ụfọdụ ndị na-ege ntị, na-enye ohere maka ịhazi aha na itinye aka na onye ndebanye aha ahụ. Mgbasa Ozi Nyochaa ndị ahịa Winkelstraat.nl ngalaba nke akwụkwọ akụkọ ya dabere na nchịkwa mmadụ na ọdịmma iji gosipụta nkwalite nye ndị ahịa nwere mmasị.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na akwụkwọ akụkọ email nwere ike inye ndị ahịa gị njikọ aka oge niile, yana ịdị irè ha nwere ike nyochaa ma tụọ ha nke ọma. Ngwongwo ohuru ohuru na enye gi ohere inweta ihe di egwu site na akwukwo ozi email gi, ma enwere ike ikwuwa okwu otutu oge na nke oma nye otutu ndi mmadu na ego di ala.
Setịpụ ihe kacha mkpa
Debe ihe dị mkpa maka izi ozi ala email.
Tupu ịbanye n'ụdị dị iche iche na ihe akọwapụtara nke nnukwu akwụkwọ akụkọ email, ọ bara uru ịtụle ma akwụkwọ ozi e-commerce ọ dị mma maka azụmaahịa gị.
Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ email bụ atụmatụ bara uru maka ọtụtụ azụmaahịa, enwere ọnọdụ ụfọdụ ebe ọ ga-amị mkpụrụ karị ịchụso ohere ndị ọzọ, dịka mgbe ị na-atụle ngwa ahịa ọ bụla ọzọ. E-commerce bụkarị ụlọ ọrụ na-erite uru site na akwụkwọ akụkọ email, mana nyocha nke ụdị azụmaahịa ụfọdụ nke nzukọ gị ga-agwa gị ma atụmatụ ahụ ọ ga-akwụ ụgwọ maka gị.
Dezie ozi ịntanetị email na ebumnuche azụmahịa zuru oke.
Nzọụkwụ mbụ na nyocha ọ bụla dị otú a bụ iji nlezianya tụlee ebumnuche azụmahịa gị. Kwesịrị ịkọwapụta ihe ị na-atụ anya ị ga-esi na mgbasa ozi ahịa email.
Ọ bụrụ n’ịgbalị ịzụlite mmekọrịta nke onye debanyere aha gị nke ọma, ịnwere ike ịga nke ọma ozugbo site na mkpọsa akwụkwọ akụkọ ahaziri nke ọma. Ọzọkwa, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchigharị mgbanwe maka weebụsaịtị gị, ịmepụta ọdịnaya akwụkwọ akụkọ nwere ike inyere gị aka iji nlezianya duzie atụmanya gị site na njem ndị ahịa na-azụ, na-ebute pasent dị elu nke ahịa ọ bụla na onye ọbịa ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ebumnuche azụmaahịa gị bụ isi anaghị adaba na akwụkwọ akụkọ email ezubere iji mezuo, ọ nwere ike ịka mma iji ego gị ebe ọzọ. Gbalị ịchekwa atụmatụ akwụkwọ ozi email nke akụ na ụba na-akwadoghị, atụmatụ, na nlekọta nwere ike bụrụ ihe na-emebi emebi karịa iziga akwụkwọ akụkọ ọ bụla.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na otu ebumnuche gị bụ ịkwanye ahịa ndị ọzọ site na mmekọrịta, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtụle itinyekwu ego na imepụta mmemme onye nnọchi anya na onye reseller. Mana n'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịmepụta otu akwụkwọ akụkọ doro anya maka ndị otu na-enye ozi na akụkọ n'azụ ihe ngosi.
Kee ihe ndi kwesiri
Ihe ọzọ dị mkpa na mkpebi a bụ iji ezi obi na-amata ụdị akụ gị iji nweta ihe mgbaru ọsọ nke akwụkwọ akụkọ email gị.
Enweghị ike ikwusi ike: Ọ bụrụ na mmejuputa akwụkwọ akụkọ akwụkwọ akụkọ gị enweghị usoro, enweghị isi, na abaghị uru, mgbe ahụ ọ bụghị oge kwesịrị ịga n'ụzọ a. Automzụ ahịa akpaaka nwere ike inyere gị aka ị nweta nsonaazụ ma bulie mkpọsa email gị ka azụmahịa gị na-eto, mana ị ka chọrọ ikike na njikere ịrara ihe zuru oke iji chọpụta ụzọ ọ ga-esi mee nke ọma.
Tupu ịmalite, kpebie ego dị mma, usoro nnweta maka ndị ga-enye aka, yana atụmatụ iji nweta nkwado maka ụzọ ahụ site na mpaghara ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ (IT, akụrụngwa mmadụ, imewe). Ozugbo inwere nghọta doro anya banyere ihe achọrọ maka mkpọsa akwụkwọ ozi e-chọrọ, yana ihe ndị dịnụ, ị ga-enwe ike iso ndị nwere oke aka rụkọọ ọrụ iji mee mkpebi doro anya gbasara mmemme nke mmemme ahụ maka akara gị.
Ná nkezi, ndị na-ere ahịa na-eziga ozi ịntanetị ecommerce abụọ na ise kwa ọnwa. Nke a pụtara na ndị na-ere ahịa email na-emepụta ọtụtụ ozi ịntanetị kwa afọ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere otu egwuregwu dum raara nye ọrụ ha. N'ihi gịnị? N'ihi na ọnụọgụ ahịa email na-egosi na email nwere nloghachi kachasị elu na itinye ego na njikọ kachasị elu n'etiti ọwa ahịa.
Enwere ROI enwere ike ịnwe
Ọ dị mma, ya mere mkpọsa akwụkwọ akụkọ ecommerce dị mkpa… mana iziga ha ezughị. Ha kwesiri ịbụ ndị mara mma, ma ọ bụghị na ha ga-eziga gị na igbe akwụkwọ ozi spam ma ọ bụ ndị ahịa ga-wepu aha ha kpamkpam. Yabụ kedu ihe na-eme ka ịre ahịa ahịa email?
Akwụkwọ akụkọ nwere ọdịnaya vidiyo
Video dị ka ọkara maka oriri ọdịnaya na-ewu ewu. Ulo oru nke na-eji vidiyo maka ebumnuche ahia na-ahuta onu ahia 41% na saiti ha. Ma, e nwere azụ: àgwà metụtara… a otutu. 62% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnwe echiche na-adịghị mma banyere ụdị na-ebipụta ọdịnaya dara ogbenye.
Iji vidiyo na ozi ịntanetị na-arụkwa ọrụ. Na enye na-ekwu na videos ntọt click-site ọnụego site 55% na akakabarede site 55% na 24%. Yabụ kedu ka esi etinye ndị a?
E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche:
Jiri onyonyo nwere onye na-akpọ “Gwuo” ma jikọta ya na isi mmalite vidiyo dị na weebụsaịtị, blọgụ ma ọ bụ Youtube ọwa.
Jiri GIF na-emegharị emegharị site na vidiyo gị na email nke na-emetụta isi iyi vidiyo.
Tinye vidiyo dị na email ahụ ka onye ahịa wee lelee ya na-enweghị ịga ebe ọzọ.
Mara: Ọ bụghị nyiwe ozi ịntanetị niile na-akwado teknụzụ HTML5 na naanị 58% nke ndị nnata ga-enwe ike igwu vidiyo nke etinyere na email. Ndị ọzọ, gụnyere Gmail, Yahoo, na ndị ọrụ Outlook ga-ahụ ihe ndabere. Ihe onyonyo nke onye na - akpọ “Kpọọ” bụ nzọ kacha dịrị nchebe.
Kedu vidiyo ndị m kwesịrị ịkekọrịta?
Vidio kwesịrị ịkwado ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ ahụ: mepụta uru bara uru ma ọ bụ webata ihe. Lee ụfọdụ ihe atụ.
Ngosipụta nke nchịkọta ọhụrụ
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị bụ onye na-ere ahịa email na Giorgio Armani Fashion House. Mgbasa ozi email ọhụrụ gị ga-ewebata ihe ọhụrụ site na nchịkọta uwe ụmụ nwanyị oge opupu ihe ubi / oge ọkọchị 2016. cannwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi ahụ na iwu "Play" nke vidiyo nke nchịkọta ọhụrụ na YouTube ma ọ bụ mepụta onyonyo GIF na-akpali akpali wee jikọta ya na YouTube.
Echiche banyere ihe ị ga-eme na ihe ndị a zụrụ
Ka anyị kwuo na ị na-ere ịchafụ. Nwere ike ịgbakwunye vidiyo na-akọwa ọtụtụ ụzọ iji ebu ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ nke kacha ere ahịa. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-ere ngwa maka ụmụ nwanyị, gbakwunye vidiyo ka esi kechie obere onyinye nke ọma.
Chee echiche banyere ụdị onye ị chọrọ ịzụ. Kedu akụkụ ndị ọzọ nke ụdị ndụ ha ị nwere ike nyere aka kụziere ma ọ bụ ịkọwa, ọkachasị gbasara ngwaahịa gị?
Akaebe Ndị Ahịa - Mepee vidiyo, Nyocha
Ọ bụrụ na ị nwere vidiyo nke ndị ahịa gị na-ekwu maka akara gị, tinye ya. Nzaghachi ziri ezi na-emesi ndị ahịa obi ike ma na-agba ha ume ịzụta. Lee nke a akpọchi video. Ọ na-ewepụta ngwaahịa ahụ nke ọma ma nwee ọtụtụ puku echiche. Can nwere ike iji mkpọsa ozi ịntanetị soro ndị ahịa mgbe ịzụrụ ma gbaa ha ume izipu ihe.
Akwụkwọ akụkọ nwere ihe onyonyo GIF
Ozi mgbasa ozi na - aga aga nwere ike ịkọ akụkọ ma jide ndị ahịa mma karịa onyonyo ọ bụla. Jiri ha maka mmemme azụmaahịa email gị ịbawanye njikọ na ịpị.
Nwere ike ịmepụta mkpọsa GIF yiri nke ahụ na sọftụwia ọkachamara. Ọ bụrụ n’inweghị ikike ma ọ bụ ndị otu gị kwesiri ime nke a, gbalịa ndị na-enye GIF ndị a dị mfe:
Akwụkwọ akụkọ na-akpọsa asọmpi
Oge okpomọkụ bụ oge dị mma iji kpọsaa asọmpi. Ndị mmadụ na-enwe ahụ iru ala, na-akpali akpali, ma dị njikere maka ntụrụndụ. Iji nweta ọtụtụ ihe mgbasa ozi gị, mepụta ihe ma nye ahụmịhe ntanetị pụrụ iche maka ndị ọrụ.
Kaadị ọkọ a nwere ike ịba uru. Ndị na-ere ozi email na-eji ya anabata ndị lọtrị iji merie mbupu n'efu ma ọ bụ onyinye. Ahịa ọkọ ahụ jupụtara na ndị ahịa email niile, gụnyere nsụgharị niile nke Outlook.
Akwụkwọ Akụkọ na ngụda
Maka oge opupu ihe ubi na ọkọchị: jiri onyinye dị nta ma tinye ngụda ngụ oge na ozi ịntanetị gị. Ọ na - enyere aka mgbe ibido mkpọsa pere mpe ma mekwaa ngwa ngwa maka ndị ahịa ịzụta ngwa ngwa.
Nwere ike ịmepụta ụdị oge a na ngwaọrụ dị ka Motionmailapp.com, emailclockstar.com, na freshelements.com. Ha ga-ewepụta koodu HTML ka ị nwee ike idetuo na mado na mpaghara HTML koodu nke nchịkọta akụkọ email.
Akwụkwọ akụkọ nwere nkwanye ahaziri iche
Recommendationsgbakwunye nkwanye na ozi ịntanetị nwere ike ibute ịrị elu 25% na ahịa na ịrị elu 35% na ọnụọgụ pịa. Ngwaọrụ dịka Nosto ga-ewepụta koodu HTML nke ga - enyere gị aka itinye ngwaahịa na mgbasa ozi email gị dabere na ịzụta ndị gara aga.
Ozi ịntanetị ndị ahaziri iche ga-abara aka maka akwụkwọ akụkọ nkwado yana ozi ịntanetị zụrụ azụ, ozi ịntanetị mgbake, na ozi ịntanetị ndị ọzọ kpatara. Nke a bụ obe-ire ma nwekwaa ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ihe omuma nke akwukwo ozi na otu esi eweputa uzo diri ulo oru gi